ဦးသိန်းညွန့် နဲ့သူ၏ မေးခွန်း
အကဲဖြတ်မလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထူးခြားတယ်လို့ပြောရမှာလား။ ဆန်းကြယ်တယ်လို့ဆိုရမှာလား။နှစ်ခု စလုံးပဲလား။ ရောထွေးနေပါတယ်။ ဒီတော့ စာဖတ်သူများကပဲ ဘယ်စကားလုံးနဲ့သင့်တော်မယ်ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ကြပါတော့။ ဦးသိန်းညွန့်ပတ်သက်ပြီးအပေါ်ယံ တွေ့ထားတာလေးတွေ ရေးပြပါရစေ။ ဦးသိန်းညွန့်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကဖြစ်ပါတယ်။
(NLD)ကနေ ပဲ့ ထွက်ပြီးနောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ(NDF) မှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပါခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေ တစ်ခါ ကွဲကြခွါကြပြီး အခုနောက်ဆုံး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် (NewNational Democracy Party )ဖွဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(New National Democracy Party ) မှာ ဦးသိန်းညွန့်က ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(NNDP)
က ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ၄ ရက်နေ့မှာ “တည်ထောင်ခွင့်” လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကော်မရှင်ကတည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်တော့မရသေးပါဘူး။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(NNDP)
ထဲမှာ ယခင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှာ လုပ်ခဲ့ဖူးသူ ၁၂ ဦးပါဝင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(NNDP)ထဲမှာ “၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ” ကနေရွေးချယ်ခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ၅ ဦး ပါဝင်တယ်လို့ (ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၂ အမှတ် ၅၈၊ စာမျက်နှာ၈ ) မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဦးသိန်းညွန့်
ဟာ“၁၉၉၀ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲ” မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး။ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)ကနေရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် “၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ”မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ (NDF) ကနေဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ကနေ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ
၂ခုဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု နှစ် (၂၀) ကျော်ကွာဝေးပါတယ်။ သူကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီကတော့ (၃)ပါတီပြောင်း ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ၂ ခုစလုံးမှာမြို့နယ်တစ်ခုထဲကနေရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းညွန့် ကို၂ကြိမ်စလုံး ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်း ကလူတွေ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းမဲ့ သက်သက်တော့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြ တာ တော့ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။ထူးခြားတယ်ပြောရမလား၊ ဆန်းကြယ်တယ်ပြောရမလားဆိုတာ အဲဒီလိုအချက်တွေကြောင့် ပြောရတာပါ။ ဦးသိန်းညွန့်ကယခုကျင်းပနေဆဲလွှတ်တော်ထဲမှာ မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ “၁၉၉၀
ပြည့်နှစ်ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အရ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ခန့် ရပ်တည်ခဲ့သောတရားဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၂၀) နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တစ်နည်းနည်းဖြင့်အသိအမှတ်ပြုရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ သိရှိလိုကြောင်း” မေးမြန်းခဲ့တယ်။ သူ့မေးခွန်းကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင် ကပြန်လည်ဖြေကြားတယ်။ ဦးမြင့်နိုင်
က၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ (နအဖ) ရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၃/၂၀၁၀) ပုဒ်မ ၉၁(က) “ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ်၁၄/၈၉) ကို ဤဥပဒေဖြင့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်”၊ (ခ) “ဤဥပဒေဖြင့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့် ဥပဒေအရ ကျင်းပခဲ့သော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် လိုက်လျောညီထွေမရှိတော့သည့်အတွက်ယင်း ရွေး ကောက်ပွဲရလဒ်များသည် အလိုအလျောက်ပျက်ပျယ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်”ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကို ကိုးကား ပြီးဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ “၁၉၉၀
ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ” နဲ့ “ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်” တို့ဟာ (နဝတ-နအဖ)စစ်အစိုးရရဲ့ မှတ်တမ်းဝင် အထင်ကရ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုဘယ်သူမှ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့မရပါဘူး။
ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ (နဝတ) စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၈၈)မှာပါရှိတဲ့ တာဝန်ကြီး ၄ ရပ်အနက် စတုတ္တမြောက်နောက်ဆုံး တာဝန်ဟာ “ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ”ကျင်းပရေးဖြစ်ပါ တယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့မတ်လ
(၃၀)ရက်နေ့မိန်းခွန်းမှာလည်း (နအဖ)စစ်အစိုးရက “အမွေခံကောင်းတွေပေးခဲ့ပြီ” လို့ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သလို၊ ဟင်္သတမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဌေးဦးက လည်း(နအဖ) စစ်အစိုးရ လုပ်ဆောင် ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးကို ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇)ရက်မြောက်နေ့မှာ “ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အဆို”တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ (နဝတ-နအဖ)စစ်အစိုးရရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို
အဆိုပြုကြ၊ မှတ်တမ်းတင်ကြတဲ့နေရာမှာ “၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ” နဲ့ “ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်”ကိုချွင်းချန်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁၊ မေလ၂၇ ရက်နေ့ (ဗွီအိုအေ)နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က “ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်
လို့ဆွေးနွေးတဲ့၊ စကားပြောတဲ့ဟာတွေထဲမှာသမိုင်းမှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တချို့က သုံးပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသမိုင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောရတယ်ဆိုရင်ကို ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘယ်လောက် အရေးပါခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုတာပဲ။ သမိုင်းနဲ့ကို ချီပြီးတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက အရေးကြီးခဲ့တယ် ဆိုတာကိုကျမတို့
အနေနဲ့ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလဒ်ကို အသိအမှတ် မပြုတာကို အမြဲကန့်ကွက်တယ်။ NLD ကို အာဏာမပေးလို့မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူလူထုကို မလေးစားလို့။ ပြည်သူလူထုကို မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးပြီးတော့ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေကို ချေဖျက်လို့၊ မလုပ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဆိုတာ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းအတွက်မကောင်းဘူး။ ကျန်ခဲ့တဲ့သမိုင်း မဟုတ်ဘူး၊ နောင်လာမယ့် သမိုင်း အတွက်လည်း မကောင်းဘူး”
လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ဗျာ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်ပေးခဲ့တဲ့ အဖြေအရဆိုရင် “၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ဖျက်သိမ်းမှု”ကို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်နဲ့ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရသစ်နဲ့ လွှတ်တော်က အသိအမှတ်ပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်“၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ” နဲ့ “ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်” (တည်ရှိပြီးမှု)ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရမှာပေါ့။
ဒါ့အပြင် “၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုရေး” ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ“ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း”ထဲက အရေးကြီးတဲ့ သဘောထားရပ်တည်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးနိဂုံးအနေနဲ့အဆိုတစ်ခုပြုခဲ့ပါရစေ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲမှာ “၁၉၉၀ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိရှိ လိုကြောင်း” မေးမြန်းခဲ့တဲ့
ဦးသိန်းညွန့်ဟာ “၁၉၉၀ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲရွေးချယ်ခံဖြစ်သူ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့” သူ့တာဝန်ရှိမှုကိုသူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ထမ်းဆောင်သွားပဲလို့ အဆိုပြုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ကြမှာပါလိမ့်။ ညွန်း
- ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း(၂၀၀၉ ဧပြီ ၂၉ ) - မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ(၂၀၁၁ မတ် ၃၀- ၃၁ ) - မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ(၂၀၁၁ သြဂုတ် ၃၀ ) - ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ် (အတွဲ၂ အမှတ် ၅၈၊ စာမျက်နှာ ၈) - ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ မေလ ၂၇ရက်၊ မသင်းသီရိ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်တာဗျူး (ဗွီအိုအေ) သတင်းဌာန - နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်ချက်သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်း ( ၁၉၈၈ ခုနှစ် မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်) သစ်ထူးလွင်
9/11/2011 08:17:00 AM
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့က သစ်တောဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းအောင်မှ တရုတ်စွယ်တော်ကျောင်းမှ မဟာယနဘုန်းကြီးများအား "ဤသို့ ထီးတော်မိုး သစ်တော်ဆက်နေပုံ"
သွေးစွန်းသော နေ့ရက်များဖြစ်တဲ့ စက်တင်ဘာလ သို့ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီ..။ ၁၉၈၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၈ရက် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှု နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်သလို ၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာတော်များရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုအား စစ်အာဏာရှင်များရဲ့ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုအောက်မှာ သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့ ရဟန်း၊
ရှင်လူ ကျောင်းသား အပေါင်းတို့ရဲ့ သွေးစွန်းသော နေ့ရက်များလည်း ဖြစ်ပါတယ်...။ ကမ္ဘာကြေသော်လည်း ဥဒါန်းမကြေနိုင်တဲ့ သွေးစွန်းတဲ့ နေ့ရက်တွေပါပဲ...။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး ၄နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အရာရာတိုင်းဟာ မနေ့တနေ့ကလိုပါပဲ။
ရွှေရောင်နှစ်ပတ်လည်နေ့ မတိုင်ခင်မှာ နှိုင်းယှဉ် တင်ပြလိုတာကတော့ အာဏာရှင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် အမှန်တကယ် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ရှိမရှိနဲ့ သရဏဂုံပျက်ကြောင်း တရားတွေကို သိမသိဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ...။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာလား၊ အပေါ်ယံ ဗုဒ္ဓဘာသာလားဆိုတာ ခွဲခြားသိရအောင် အောက်ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့
ရွှေတိဂုံ အနောက်ဖက်မုခ်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်နေ့က သံဃာတော်တွေမှ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းချင်း မခံရမှီ အာဏာပိုင်များအား ထိုင်ကန်တော့နေတဲ့ ပုံပါ..
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး အပြီး၁လကျော်အကြာ ၂၀၀၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ရက်နေ့က တရုတ်စွယ်တော်ကျောင်းမှ မယာယနဘုန်းတော်ကြီး Chan Zangနဲ့ အဖွဲ့အား
သစ်တောဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းနှင့် အဖွဲ့မှ ဤသို့တရိုတသေ၊ လက်အုပ်မိုးလျှက် တွေ့ရစဉ်ပုံပါ..။ ရတနာသုံးပါးမှ တပါးမှ ကိုးကွယ်ရာမရှိဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတော်လာ သရဏဂုံပျက်မပျက် ဆိုတာတောင် မသိရော့လေသလားလို့ ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်...။
အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေးတွေ မခြောက်သေးတဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာပဲ တရုတ်မဟာယန ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ဤသို့ တရိုတသေ ကြိုဆိုဂါရဝ ပြုခဲ့ကြပါတယ်...။ တရုတ်က
စွယ်တော်ကျောင်းအတွက် ထီးတော်မိုး၊ သစ်တော်ဆက်ပြီး ပြည်သူပိုင် သစ်တန်ချိန် ၃၀၀ကျော်ကို မိမိပိုင်သဖွယ် လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်..။ မိမိတိုင်းသူပြည်သား
သာသနာဝန်ထမ်း ဘုရားသားတော်တွေ အပေါ်မှာတော့ တခြားဘာသာဝင်တွေ အကြည်ညိုပျက်အောင် မဟုတ်တမ်းတရားစွပ်စွဲ၊ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ နှိပ်ကွက်ခဲ့တဲ့ သာသနာကို ကြည်ညို လေးစား သယောင်ဆောင်နေတဲ့ အာဏာရှင်များမှ.. တရုတ်မဟာယာန ဘုန်းတော်ကြီးများ ရောက်ရှိလာတဲ့ အခါမှာတော့..
သစ်တောဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းအောင်မှ ထီးတော်မိုး၊ ဒူးတုပ်၊ ပဆစ်ကြုပ် ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုးပြီး ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းကို မိမိပိုင်ပစ္စည်းကဲ့သို့ လှူဒါန်းရသော အကျိုးအားကြောင့်တဲ့ လေ...။ အာဏာအောက်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ သာသနာ...နဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ပြည်ပအားကိုး သာသနာလို့ ဆိုရလေမလား။ ဘာသာရေး အခြေခံပဲ အားနည်းနေလား... တိုင်းတပါးသာသနာကိုပဲ အထင်ကြီးလေသလား ဆိုတာကတော့ ပါးစပ်က သာသနာတော် ပြန့်ပွားရေးဆိုပြီး အသံကုန်အော်နေတဲ့ အာဏာရှင်တွေ မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် မိမိ
ဓာတ်ပုံတွေဟာ ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သား ဘုရားသားတော် ထေရဝါဒ သံဃာတော်များအား ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ် ညှင်းပန်း နှိပ်ကွက်ခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး အပြီးတလ ကျော်ကျော်လေးအချိန်က မဟာယာန တရုတ်ဘုန်တော်ကြီးနှင့် အဖွဲ့အား နအဖအာဏာပိုင်တွေက ရိုသေဆည်းကပ်ပြပြီး စော်ကားပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်..။ တဖက်မှာ
ပြည်တွင်းသံဃာတော်တွေရဲ့ ကျောင်းတွေဖျက်ဆီး၊ ချိတ်ပိတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်ပက မဟာယာန ဘုန်းကြီးတွေအတွက် ကျွန်းသစ်တွေ လှူဒါန်းပါတယ်...။ ပြည်တွင်း
သံဃာတော်တွေအား သတ်ဖြတ် ရိုက်နှက် မတရားဖမ်းဆီးနေတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်ပက မဟာယာန ဘုန်းကြီးတွေအား ထီးတော်မိုး၊ အခမ်းအနားတွေနဲ့ ကြိုဆိုပြခဲ့တာပါ..။ အင်မတန်မှ ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရပ်ပါ..။
၂၀၀၉ခုနှစ် ၆လပိုင်းက တရုတ်ပြည်စွယ်တော် ကျောင်းသို့ နအဖဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးနှင့် အဖွဲ့ရောက်ရှိစဉ်က ကတော်များမှ
မဟာယာန တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီးများအား ဤသို့ လက်အုပ်မိုး၍ ရှိခိုးဆည်းကပ်နေစဉ်..။. သရဏဂုံ ပျက်မပျက် ဆိုတာကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် သတိထားမိပါလေစ...။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ လာမည့်ရက်တွေမှာ ရွှေဝါရောင်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီး ၄နှစ်ပြည့်မြောက်ပါတော့မယ်...။ အာဏာအောက်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ သာသနာအား သာသနာအောက်သို့ အာဏာပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး ပြန်လည်မြှင့်တင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်...။ ကမ္ဘာကြေသော်လည်း ဥဒါန်းမကြေနိုင်ပါ...။
ခေတ်အဆက်ဆက် သမိုင်းအဆက်ဆက်မှာ ပြည်သူ့အတွက် အသက်ပေး စတေးခံသွားကြတဲ့ သာသနာ့အာဇာနည်များ၊ အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာ မတရားအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရအပါအဝင် သံဃာတော် အရှင်မြတ်များနဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး အတွင်းမှ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ် အပေါင်းတို့အား ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး အမှတ်တရအဖြင့် ရေးသား၍ ရိုသေမြတ်နိုး လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုး ကန်တော့အပ်ပါတယ်....။
ရန်ကုန် ပြည် ကားလမ်းမပေါ်က ကြို့ပင်ကောက်ဆိုတဲ့ မြို့ကလေးကို ဖြတ်သွားမိရင် သူများတွေ ဘာတွေ တွေးမိသလဲ တော့ မသိဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အင်မတန် နံမယ်ကြီးတဲ့ လေချွန်နတ်ဆိုတာကို သွားသတိရပါ တယ်။ သူက
ရှေ့ဖြစ် နောက်ဖြစ် ဗေဒင်ယတြာတွေ ဟောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကွယ်လွန် သွားတဲ့လူတွေ တမလွန်မှာ ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ် ဖြစ်မဖြစ်၊ ဘယ်လိုဘ၀မျိုး ကူးပြောင်းသွားတယ်လို့ ဟောနိုင်ပြီး မကျွတ်မလွတ်သေးလို့ရှိရင် အ လွမ်းပြေ ချတ်တင်ဝင်လို့ ရသတဲ့။ စစ်ကိုင်းပြည်တို့ ရွာဦးမစိန်ကြာတို့လို အရုပ်မမြင်ရပေမယ့် ဂျီးတော်နဲ့ ချက်သလို အ သံကလေးတော့ ကြားနိုင်သတဲ့။ သို့သော်ငြားလည်း မြန်မာပြည်ကွန်နက်ရှင်နဲ့ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ တရွှီရွှီနဲ့ လေချွန်သံတွေချည်းပဲ ကြားနေရတာနဲ့ နတ်ကတော်လုပ်တဲ့ ဘွားတော်ကြီးက အင်တာပရက်တာ လုပ်ပေးရပါသတဲ့။ သူ့ခေတ်နဲ့ သူ့အခါတုန်းကတော့ အင်မတန်မှန်တယ်တဲ့ဗျား။ ရွှေမန်းတင်မောင် ဘယ်ဘ၀ရောက်နေတယ်တို့ ဘာတို့ တောင် အတိအလင်း ဟောနိုင်တယ်လို့ ပြောကြတာပေါ့။ ဗမာပီပိ ဗေဒင်မေး၊ နတ်မေး၊ အတင်းတုပ်၊ အိမ်လည်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မနေနိုင်တဲ့ အမျိုးဆိုတော့ အပျင်းပြေ သွားမေးကြည့်ရင် မကောင်းဘူးလား။ လာ .. လိုက်ခဲ့ …။
ကျွန်ုပ် …. အမေကြီး။ နေကောင်းလား။ အရင်လို ဟောနိုင်ပြောနိုင်တုန်းပဲလား။
လေချွန်နတ် …. ကောင်းပ မောင်ရာ။ အရင်လောက်တော့ ဘယ်ဟောရတော့မလဲ။ ခေတ်ကာလ သားသမီးတွေက သေ သောသူ မကြာခင် မေ့ကုန်ကြလို့ အမေးအမြန်း သိပ်မထူတော့ဘူး။ သေတဲ့သူတွေကလည်း ရှေးကလို မြေကြီးထဲ ရွှေ တွေ မြှုပ်ပစ်ခဲ့တာမှ မရှိတော့တာ။
ကျွန်ုပ် …. အမေကြီးက သေပြီးသားလူဆို ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပြန်ခေါ်မေးးလို့ရတာပဲလားဗျ။
လေချွန်နတ် …. ဘ၀မကူးသေးရင်တော့ ရတာပကွယ်။ မင်းတို့ ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေတောင် အနော်ရထာ လက်ထက် က ဖျဉ်းဘရားသား ခေါ်ခေါ်ပြီး ပါတီပေးပေးနေကြတဲ့ ဥစ္စာ။ နတ်နဲ့ နဂါး မလှည့်စားနဲ့တဲ့။ ဘာလဲ။ ပညာစမ်းချင်လို့လား။ ငါ .. တယ် …။
ကျွန်ုပ် …. ယုံပါပြီ အမေရယ်။ ယုံပါပြီ။ ခုခေတ်နတ်ကတော်တွေက ကွမ်ရင်မယ်တော်ကြီးတောင် ရအောင်ပင့်နိုင်တာ တွေ့ပါတယ်။ ဒါထက် စကားမစပ်ဗျာ။ သူတို့လို ဘာသာမတူတဲ့ လူမျိုးခြားနတ်တွေ ၀င်လာပြီး ပြောရင်လည်း အမေတို့ က နားလည်တာပဲလား။
လေချွန်နတ် …. တော်ပြောမှပဲ ကျုပ်တို့နတ်ကတော်တွေ ယူအက်ဖ်အယ်လ်ပြေးပြီး စပီကင်တက်ထားရမယ့်ပုံ။ နတ်တို့ ၏ ဘာသာစကားဆိုတာ မနောက ပြောတာကွဲ့။ ထရန်စလိတ်တာ မလိုဘူး။ ချက်ဆို နားခွက်က မီးတောက်တယ်။ ဂွပ် ကနဲ့ဆို ဓါတ်ပြီးသား။ နပ်လွန်လွန်းလို့ နတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ သားရယ်။
ကျွန်ုပ် …. ပေါက်ပါပြီ အမေ။ ပေါက်ပါပြီ။ ပညာစမ်းတယ်တော့ မအောင့်မေ့ပါနဲ့။ မေးချင်သိချင်တဲ့စိတ်တွေ များလွန်းလို့ မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သေတာတော့ နည်းနည်းကြာပါပေါ့။ အမေကြီးရဲ့ စက်တလိုက် ထဲမှာ ဘရောင့်ဇ်လုပ်ပေးပါဦး။ ရှိများရှိရင် မေးလိုက်ချင်ပါရဲ့။
လေချွန်နတ် …. နံမယ်နဲ့ သေတဲ့ခုနှစ်ကို ပြောလေ။ ဒေတာ အန်းတားမလုပ်ပဲ ငါက
ဘယ်လိုရှာရမှာတုန်း။ ဘယ်လို သူ ငယ်ပါလိမ့်။ သတင်းစာထဲမှာ ယောက္ခမလွမ်းစာတွေ
ကျွန်ုပ် …. ဟုတ်ပါဘူး အမေကြီးရယ်။ သေတဲ့ခုနှစ်ကလေး ပြန်စဉ်းစားနေလို့ပါ။ မှတ်မိပြီဗျ။ ခရစ်တော်မပေါ်ခင် ဘီစီ ၃၉၉ မှာ ကွယ်လွန်သွားတာ။ နံမယ်ကတော့ ဆော့ခရိတ္တိ လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ပါတီအတွေး အခေါ်စာအုပ်တွေထဲမတော့ အင်္ဂလိပ် စာလုံးပေါင်းအတိုင်း ဗမာလိုအသံထွက်ပြီး ဆိုကရေးတီး လို့ ခေါ်ကြတယ်။
လေချွန်နတ် …. သောက်ကျိုးနည်း။ လက်စသတ်တော့ နင်က ငါ့ကို ပညာစမ်းနေတာပေါ့လေ။ ရွှီဘွားတော်ဟဲ့။ သေမှာ မကြောက်လို့ ပေတရာလျှောက်နေတာ။ နင့်အကောင် နတ်ဖြစ်နေလို့ကတော့ ခေါ်ပြလိုက်မယ်။ မေးစမ်းတော်။ အမုန်း။ ပြီးရင် နင့်ကိုပါ သူနဲ့ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ @#$%…..
ကျွန်ုပ်… ဟော … လာပြီ လာပြီ ဒေါ်သက်ရီ။ ဘယ်ရပ်ဘယ်ရွာကလာတဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကလေး အင်ထရို လုပ် တော်မူပါဦး ဖျာ့။
ဆော့ခရတ္တိ …. အောင်မယ်။ ခေါ်တုန်းကခေါ်ပြီး။ အခုမှ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ နံမယ်က ဆော့ခရိတ္တိ၊ အိုလံ ပပ်စ်တောင်တော်။ ခေါမပြည်ကလာတာ ။
ကျွန်ုပ် … သိပါပြီ ဆရာကြီးရယ်။ လေးစားလွန်းလို့ ပင့်ရဖိတ်ရတာပါ။ အော်မီသော်ဖော် (အမိတဘ) စိတ်မရှိပါနဲ့။ ပညာ ရှိစကားများ တမလွန်က ကြားရရင်တောင် အမှောင်ခွင်း အလင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ပါ။ အမိုက်အမဲလေးတွေကို ဗွေမ ယူပါနဲ့။ ဆိုကျောင်းလောင် (ဆိုဆရာတော်)။
ဆော့ခရိတ္တိ …. လေသံတွေ ကြားရတာကတော့ တရုတ်ပြည်ကြီးရဲ့ ပြည်နယ်တခုက မှတ်တယ်။
ကျွန်ုပ် …. အညာကဆရော်လို့ နှုတ်ဆက်ရင် မြောက်ကိုရီးယားကလို့ မှတ်မှာလား အားပုဂျိရယ်။
ဆော့ခရိတ္တိ …. အေးကွဲ့။ တောင်ကိုရီးယားစော်ကတော့ နည်းနည်းမှ မနံတာအမှန်။
ကျွန်ုပ် …. လိုရင်းမရောက်ဘဲ ချော်တောငေါ့သွားတော့မှာပဲ။ ဆရာကြီး ခင်ဗျား။ ဆရာကြီးကို အေသင်မြို့သူမြို့သား တွေက အဆိပ်ခွက် ကိုယ်တိုင်သောက်စေပြီး ကွပ်မျက်ခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဘာအမှုနဲ့များပါလိမ့် ခင်ဗျာ။
ဆော့ခရိတ္တိ …. နတ်ဘုရားများကို ပူဇော်ပသခြင်း မပြုမှု၊ လူငယ်တွေကို ဘုရားတရားမကြည်ညိုအောင်၊ မိဘ ဆိုဆုံးမရ ခက်အောင် မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်မှု၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်မလုပ်ပဲ မိုးအောက်မြေပြင် ဟိုဟာမှန်တယ်။ ဒီဟာမှားတယ်နဲ့ လျှောက်တွေးနေပြီး အဲသလိုတွေးထားတာတွေကို သူများတကာ နားလည်လက်ခံလာအောင် ပလီစိချောက်ချက်တွေ ဟောပြောရေးသားမှု ပါတဲ့ကွယ်။ လိုရင်းကို တခွန်းတည်း ပြောရရင် ယုံကြည်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်လို့ အသက်နဲ့လဲခဲ့ တာပေါ့ကွ။
ကျွန်ုပ် …. ကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ချက်ချင်းမတူတာနဲ့ပဲ၊ ကိုယ့်သြဇာမတည်မြဲမှာ စိုးတာနဲ့ပဲ အပြစ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး အဲဒီအပြစ် အတွက် သေဒဏ်စီရင်တယ်ဆိုတော့ အေသင်မြို့သူမြို့သားတွေဟာ တော်တော် ရက်စက်မိုက်မဲကြပုံ ရတယ်နော်။
ဆော့ခရိတ္တိ …. အဲလို မပြောရဘူးကွ။ ဂျူရီလူကြီးပေါင်း ၅၀၀ က ဆုံးဖြတ်တာ။ အများစုက ဥပဒေနားမလည်တဲ့ အပျော် တမ်းဝါသနာရှင်တွေ၊ လူအိုလူမင်းနဲ့ ဒုက္ခိတတွေလည်းပါတယ်။ အိမ်မှာနေရတာပျင်းလို့ တနေ့ သုံးအိုဘို ရလည်း မနည်း ဘူးဆို လာထိုင်နေတဲ့သူတွေလည်း ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အေသင်နိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေက စီရင်လိုက်တာဆိုတော့ ခံ သာတာပေါ့ကွာ။ မင်းလည်း သိပ်အာချောင်မနေနဲ့။ အေသင်သားတွေ မင်းတို့ဆီ ၀င်စားတာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမှန်း
ကျွန်ုပ် …. ဟုတ်မယ်။ ဟုတ်မယ်။ ကျွန်တော်တောင် တယောက်သိသေးတယ်ဗျ။ သူ့နံမယ်က အေသင်ချိုဆွေတဲ့။ က လေးမလေးက ချစ်စရာလေးပါ။ ဒေါသတော့ ကြီးမယ့်ပုံနော်။ ဒီမှာ တင်းတယ် တင်းတယ်။ တင်းတယ် တင်းတယ် ဟေ့ …. ဆိုလား။
ဆော့ခရိတ္တိ …. ၀ါသနာတွေက တားလို့ကို မရဘူး ပေါ်ပေါ်လာပြီ။ မင့်မှာ ငါ့လို အမှန်တရားအတွက် ယုံကြည်ချက်အ တွက် အသက်စွန့်ဝံ့တဲ့သတ္တိလည်း မရှိဘဲနဲ့။ မရဲဘဲ ကျွဲပြဲ မစီးချင်ပါနဲ့ကွယ်။ မင့်လောက်ကတော့ သေဒဏ်တောင် ပေးစ ရာမလိုဘူး။ ထောင်ရောက်တန်းရောက်နဲ့တင် ဇီဝိန်ကြွေသွားမှာ။ ဖောင်ကြီးဆန်တောင် မစားနိုင်ဘဲနဲ့ ထောင်နှုတ်ခမ်း နင်းဦးမလို့လား။ ရယ်ချင်တယ်။
ကျွန်ုပ် …. ဟုတ် …. ဟုတ်။ သားသား ကြောက်ကြောက်ပါခင်ဗျ။ (တရုတ်ကလေးတွေခေါ်တဲ့ ကျောက်ကျောက် မဟုတ် ဘူးနော်) ဆရာကြီးကလည်း .. အနော်က ဘာတွေလုပ်နေလို့တုန်းလို့။ ဟာပဲ .. ဟာပဲ။ ဟာဗျာ … ဟာဗျာ။
ဆော့ခရိတ္တိ …. ငါတို့ အိုလံပပ်စ်တောင်တော်ကို နင်ရောက်နေတဲ့ အမ်းလို မှတ်နေလား။ ရေ၊ မီး၊ ဖုန်း၊ အင်တာနက် ၂၄ နာရီ။ ဒေါင်းချင်တိုင်းဒေါင်း ကောင်းမှကောင်း ကွန်နက်ရှင်နဲ့။ (နတ်တို့စံရာ တောင်တော်သာပေကိုး) ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲ နင် ရေးထားတဲ့ ပေါက်တတ်ကရ အတွေးတွေကို ဟိုလူရှဲ ဒီလူရှဲနဲ့ ဗွက်ပေါက်နေတာ မသိပဲ ရှိပါ့မလား။ သောက်ညင်ကပ်လို့ မိတ်မဖွဲ့ ကွန်မန့်မပေးဘဲနေတာ။ ဆွဲစိလိုက်လို့ နှဲမ်ိအနောက်က တန်းစီနေရမယ်။
ကျွန်ုပ် …. ကြောက်ပါတယ် ဆိုနေမှပဲ။ မရှင်းတာကလေးတခုတော့ မေးစမ်းပါရစေဦးဗျာ။ ဆရာကြီးရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေ ထဲမှာ `ရွှေတွေငွေတွေ၊ ရာထူးဌာနန္တရတွေ ရှိတာ ကောင်းတော့ ကောင်းပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်လာခြင်း ဟာ မျှမျှတတ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘောမပါရင် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိတဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာလို့ မဆိုနိုင် ပေဘူး´ ဆိုတာကိုဖြင့် ခေတ်နဲ့ မလျှော်ညီတော့ဘူးလားလို့ သံသယဖြစ်မိပါတယ်။
ဆော့ခရိတ္တိ …. ဒီသူတောင်းစားလေးကတော့ သူ့ဘာသာရိုက်ချင်တာ ငါ့ဆီတုတ်လာငှားနေပြီ။ ဒီအကြောင်းတွေက နင် သိသလို ငါသိသလို လူတကာအသိဟဲ့။ သူတို့ဘာသာလည်း သိပြီးသား။ မသိနားမလည်လို့ မလိမ္မာတခါမိုက်တယ်ထင် ပြီး တရားပြချင်နေတာလား။ သိသိကြီးနဲ့ လုပ်တယ်ကွာ။ ဘာဖြစ်သေးလဲ။ မင်းလိုပဲ သီချင်းဆိုပြလိုက်မယ်။ `ချစ်လူမိုက် ချစ်လို့မိုက်ခဲ့တယ်…။ ချစ်လူမိုက် ချစ်လို့မိုက်ပါတယ် …။ ပြီးရော။
ကျွန်ုပ် …. သဘောရိုး အမှန်ပါခင်ဗျာ။ ဆရာကြီးရဲ့ အေသင်မြို့သူမြို့သားတွေအပေါ် နောက်ဆုံးဝေဖန်ချက် `ပညာ ဥာဏ်နဲ့ အင်အားကြံ့ခိုင်မှုမှာ ကမ္ဘာကျော်ပါလျက် ငွေ၊ ဂုဏ် နဲ့ နံမည်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါနေတာ ရှက်စရာ၊ သစ္စာတရား၊ နားလည်မှုနဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ပြည့်စုံမှုကို မေ့လျော့ထားတာ ရှက်စရာ´ ဆိုတာကလေးလည်း ရှင်းစမ်းပါဦး ခင်ဗျား။
ဆော့ခရိတ္တိ …. သူ့အရိုးနဲ့ သူ့ပြန်ထိုးရတယ်ဆိုတဲ့ဗျူဟာအတိုင်း မင်းနားလည်လွယ်အောင် မင်းတို့ဆရာဝန်တွေထဲက ဥပမာနဲ့ပဲ ရှင်းပြမယ်။ သေသေချာချာ နားထောင်။ မင်းတို့ဆရာဝန်တွေဟာ ပညာဥာဏ်တွေ အတတ်ပညာပိုင်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာက ဘယ်သူနဲ့ ယှဉ်ယှဉ်၊ မညံ့တဲ့လူတော်ကြီးတွေ တပုံတပင်ရှိတယ်လေ။ သို့သော်ငြားလည်း သားတွေ သမီး တွေ အမေရိကားမှာ စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းသွားထားဖို့ ပူတူတူးလေးကို အိမ်တစ်ဆောင်မီးတစ်ပြောင်နဲ့ထားဖို့၊ ဒီလောက မှာ ငါကလွဲရင် ဘယ်သူမှ တတ်တဲ့သူမရှိစေရဘူးလို့ အောင်လံထူနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ ဟစ်ပိုခရိတ္တိကြီးရဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ မလျှော်ညီစွာ ကျင့်ကြံနေမိလို့ရှိရင် ရှက်စရာမကောင်းပါလား။ ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားကြည့်ပြီး သဘောပေါက်ရင် ပါးစပ် ပိတ်၊ တိတ်တိတ်နေတော့။ ငါ့တုန်းကတော့
ဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ပေးတဲ့မဲ ၂၈၀ ကျော် ရလိုက်ပါ သဗျား။
ဝေဖန်ရေးဆိုတာ ကိုယ်ကဝေဖန်ရရင်သာ ကောင်းတာ။ ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ခံရရင် ဘယ်သူမှ မကြိုက်ကြဘူးကွဲ့။ မှတ်နော်။ မှတ်နော်။ မှတ်နော်။
ကျွန်ုပ် …. တခါဆို အိုအောင်မှတ်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးမေးချင်တာတစ်ခုက
ဆရာကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးသြ၀ါဒထဲမှာ `ခွဲခွာရမည့်အချိန်ကား နီးလာချေပြီ။ ကိုယ့်လမ်းသို့ ကိုယ်စီ သွားရပေလိမ့်မည်။ ငါမူကား သေလမ်းသို့ သွားတော့အံ့။ သင်တပည့်တို့သည် ရှင်လမ်းသို့ သွားကြကုန်။ ရှင်လမ်း နှင့် သေလမ်း ဘယ်ဟာက သာ၍ကောင်းသည်ဆိုခြင်းကို ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာ သိတော်မူပေလိမ့်မည်။” လို့ ဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ အခုလောက်ဆို ဆရာကြီးဟာ ရှင် လမ်းရော သေလမ်းပါ နှစ်လမ်းလုံး လျှောက်ခဲ့ပြီးပြီမို့ အတွေ့အကြုံကလေးများ အမိန့်ရှိပါဦး ခင်ဗျား။
ဆော့ခရိတ္တိ …. ဒါကတော့ ဘယ်လိုရှင်နေသလဲ ဘယ်လိုသေသွားသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့ကွာ။ အနှစ်သာ ရမရှိတဲ့ ရှင်သန်ခြင်း၊ ပြည်သူအသိန်းအသောင်း အသင်္ချေရဲ့ အရိုးပုံပေါ်မှာ ရပ်တည်ရခြင်းဆိုရင်တော့ မင်းတို့ဆီက ဆီး ဘန်းနီဆရာတော် ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းနေလိမ့်မယ်။ ထန်းလျက်မြိုလို့ ချိုချင်ရင် လျှာဖျားကသာ ချိုနိုင်တော့မပေါ့ကွာ။ အကု သိုလ်စိတ်က ခြောက်လှန့်လာတဲ့အခါ အခေါဘဏီတပ်ကြီးရံထားပြီး ဘုံခုနှစ်ဆင့်ပေါ်တက်နေလည်း ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ကန်ကန်တတ်သေးတယ်။ ဒီလိုပဲ သေတဲ့အခါမှာလည်း သန်းခေါင်သန်းလွဲ ကာရာအိုကေမှာ အမုန်းဆွဲပြီး မူးမူး ရူးရူးနဲ့အပြန် သူများကို ကားနဲ့တိုက်ရင်းသေသွားတဲ့သူနဲ့ ဦးဝိစာရတို့ ဗိုလ်အောင်ကျော်တို့လို သေခြင်းမျိုးဟာ ဘယ်တန် ဖိုးချင်းတူပါ့မလဲ။ သေပြီးနောက် မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ လားရာဂတိချင်းလည်း မတူနိုင်ဘူးဆိုတာ မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ က ပိုသိဖို့ကောင်းတာပေါ့။ တဘ၀ချမ်းသာကို တစ်သံသရာလုံးဝဋ်ကျွေးနဲ့ လဲယူရတဲ့သူတွေလောက် မိုက်လုံးကြီးတာ ရှိဦးမလား။ အခုဆို ငါသေတာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာနီးလာပြီ။ ငါ့နံမယ် မင်းတို့ ကြားဖူးနေသေးတယ်။ မသေခင်မှာ ကလော်တုပ် အပုပ်ချဖို့ကလွဲလို့ နံမည်တောင် စကားထဲထည့်မပြောချင်လောက်အောင် ပြည်သူ့မေတ္တာခံယူနေတာ မမြင် ဖူးလို့လား။ ဦးဇင်းကျော်ဟိန်းလေသံနဲ့ ဆက်ဟောလိုက်မယ်။ သိချင်သေးလို့ .. မေးနေတာလား….။
ကျွန်ုပ် …. ရှင်းပါပြီ ဆရာကြီးရယ်။ ရှင်းပါပြီ။ အကွင်းအကွင်း မုန့်တီဟင်းလိုပါပဲ။ အမိုက်ခံပြီး ဇက်ကောင်းလို့ ဓါးတောင်း နေတာ မဟုတ်ရပါဘူး။ အနေလည်းတတ်၊ အသေလည်းမြတ်အောင် ဝေခွဲတတ်ကြပါစေကြောင်း သပ္ပုရိသအပေါင်းတို့ ကို ဆရာကြီးရဲ့ သြ၀ါဒကထာကလေးများ ပြန်လည်ဝေငှလိုခြင်းကြောင့် ကူးတို့ဆိပ်က မှို့အိပ်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်။ လေ တင်လေအောက် ကြားကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှယူတော်မူကြကုန်။
လေချွန်နတ် …. ၀ါး …. ဘာပြောသွားသေးတုန်း။
(ဟိုစဉ်အခါက ကိုရင်တာ၏ စတိုင်သစ်မဂ္ဂဇင်းလာ ဆိုခရိတ္တိ နှင့် နှစ်ပါးသွားခန်းကို ဖတ်အပြီး မနေနိုင်မထိုင်ဖြစ်လာပါ သဖြင့် ငွေမြိုင်ကို တုတ်နှင့်ထိုးမိပြန်ပါကြောင်း။)
(Soe Min ဖေ့စ်ဘွတ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်)
9/10/2011 07:24:00 PM